Test New isebenzisa iconsi elilodwa legazi embule lonke emlandweni izifo ezibangelwa amagciwane - Izindaba Rule
Test New isebenzisa iconsi elilodwa legazi embule lonke emlandweni izifo ezibangelwa amagciwane
Lesi sihloko osesikhundleni “Test New isebenzisa iconsi elilodwa legazi embule lonke emlandweni izifo ezibangelwa amagciwane” lalotshwa Ian Isampula Science umhleli, ngoba The Guardian ngoLwesine 4 June 2015 18.00 UTC
Abacwaningi baye basungula ukuhlolwa eshibhile futhi ngokushesha ukuthi wembula umlando womuntu egcwele izifo ezibangelwa amagciwane kusukela iconsi elilodwa legazi.
Ukuhlolwa ivumela odokotela ukuba ufunde uhlu emagciwaneni ziye abangenwe, noma uqhubeke ukuthelela, iziguli ngisho nalapho abazange zabangela yimuphi izimpawu ezisobala.
Ubuchwepheshe kusho ukuthi GPs ayengase screen iziguli for zonke amagciwane olukwazi ukuthelela abantu. Kwakungase uguqule ukuthola izifo ezingathi sína ezifana hepatitis C kanye ne-HIV, lapho abantu bengaphila khona baphathe iminyaka eminingi engazi ukuthi.
"Ngokujwayelekile, uma udokotela efuna ukwazi uma umuntu Kuye linegciwane, babe ukuqagela ukuthi yini igciwane, bese ubheke ukuthi igciwane,"Kusho Stephen Elledge, owahola project at Brigham futhi Yabesifazane Hospital e Boston.
"Lokhu kungaholela zokuxilonga lapho abantu bahambe njalo ngonyaka kudokotela wabo uthole umlando wabo viral eqoshiwe. Kwakungase Ngokuqinisekile thola izifo ezibangelwa amagciwane ukuthi niyithatha ngokungathí sina nokuthi isiguli angazanga ababenakho,"Uthe.
The (£ 16) ukuhlolwa udonsa on kwentuthuko biology zokwenziwa futhi ngokushesha kwatholakala ukuthi isakhi sofuzo kulandzelanisa ukuze sihlaziye ngaphezu 1000 zamagciwane amagciwane human in pass one. Kuze kube manje, izivivinyo kakhulu siye safuna kuphela igciwane olulodwa ngesikhathi. Elledge ilinganisela ukuthi ukuhlolwa yakamuva, ngokuthi VirScan, kungaba ukucubungula 100 Amasampula in amabili kuya kwamathathu izinsuku.
Related: WHO ayamukelayo engu-15 test for Ebola
Ukuhlolwa zixhaphaza lokuthi isimiso somzimba sokuzivikela kwenza amasosha omzimba ukulwa amagciwane njalo umzimba etheleleke. La masosha omzimba ukuphila egazini iminyaka ngisho namashumi eminyaka.
Ukuthuthukisa isivivinyo, Elledge izakhi batches amagciwane okungenangozi ukuthwala izinsimbi amaprotheni kusukela amagciwane womuntu ezindaweni zabo. In inani, Zasezikusa amaprotheni kusukela ngaphezu 1000 zamagciwane of the 206 izinhlobo amagciwane eyaziwa ukuthelela abantu. Amasotsha omzimba sebenzisa la izindengezi amaprotheni ukuba aqaphele elalihlasela amagciwane futhi zihlasela zabo.
Uma droplet ngegazi isiguli ixubene amagciwane modified, yimuphi antibodies babe isiqhebezo on esintu igciwane amaprotheni bayaqaphela njengoba abahlaseli. Abososayensi ke ukuyikhipha amasosha omzimba bese ukuhlonza amagciwane wesintu izindengezi amaprotheni baye banamathela ku.
"Yisikhathi sokuqala kade akwazi ukubheka ngendlela engenzeleli nengakhethi ngokuphelele kulokho amagciwane bathelela abantu, futhi thina angakwenza wonke amagciwane aziwa,"Kusho Elledge. Ukuhlolwa ucosha amasosha omzimba umuntu kuveza kusuka imigomo, kodwa lezi kungenziwa alahlwe kusukela imiphumela yokuhlolwa. Imininingwane kubika iphephabhuku Isayensi.
In a ngesibonakaliso ubuchwepheshe, iqembu sahlaziya igazi 569 abantu eU.S., Iningizimu Afrika, Thailand and Peru. The test wathola ukuthi, ngokwesilinganiso, Abantu babekade abatheleleke nge 10 zama-amagciwane, Kodwa abantu okungenani ababili ecaleni kwadingeka zemilando 84 izifo izinhlobo ezahlukene amagciwane.
Izifo ezivamile babe herpes amagciwane, lapho izilonda amakhaza kubangele, enteroviruses ukuthi kwamcasula stomaches, Umkhuhlane, futhi rhinoviruses ezibanga imikhuhlane ezivamile. Labo in the US babebone izifo ezimbalwa kunalezo the kwamanye amazwe, futhi njengoba kulindeleke, Abantu abadala kwadingeka imilando acebile viral kunentsha.
Ukuhlolwa kungaletha mayelana nezinzuzo ezinkulu iziguli organ ukufakelwa. Enye inkinga ukuthi kungenza ukulandela ukuhlinzwa ukufakelwa iyona obungakulindele ekuvuseleleni amagciwane eziye ukucutha besahlanganyela isiguli noma donor iminyaka. Lezi amagciwane angabuyela sisebenza lapho uhlelo isiguli mzimba ukuyiveza ngezidakamizwa ukuvimbela kubo ekwaleni isitho. Ukuhlolwa Standard ababevame ukwehluleka sithathe amagciwane ebesilufifi ngaphambi kokuhlinzwa, kodwa inqubo VirScan kungaveza zabo odokotela ubukhona uqaphile futhi iziguli ingozi.
"Lokhu kungaba usizo kakhulu,"Wathi Iwijn De Vlaminck, engineer bezokwelapha at Cornell University eNew York, obengayembethe abathintekayo kulolu cwaningo. "Yini lokhu ikuvumela ukuba ukwenze ukubheka esidlule futhi ukukala exposure komuntu ezifweni eyedlule. Lokho kunezinzuzo ezibalulekile, ngoba ungakwazi ukubona lezi izifo ukuthi ukuya ukubambezeleka. Ungase igazi ezigulini nogwali abanikelayo ngale ndlela ebanzi kakhulu futhi zibikezela engahle nezindaba ikusasa reactivation viral. "
Ososayensi bakholelwa ukuthi ukuhlolwa uyophinde waphonsa ukukhanya izifo kanjani ezithile viral kubenza bavame abantu ezifweni ezibonakala ezingahlobene kamuva ekuphileni. Ezinye izifo kungabangela umonakalo ohlala njalo ezicutshini zomzimba, noma ashintshe amasosha omzimba, ngezindlela ukuthi ashiye abantu abaningi engozini yezinkinga medical lapho sebekhulile. Ngokwesibonelo, ukutheleleka nge Epstein-Barr virus angamvusa ingozi yomdlavuza. Kodwa nomthelela kanjani nezinye amagciwane impilo ende gama murkier kude. "Lolo hlobo analysis uyinto lokhu kwenza ngempela yini,"Kusho Elledge.
esobala, Stretchy USomlomo imibukiso 'Soft Ma ...
Ososayensi Thola 'On / Off uyale' Ngoba Hu ...
Ilukuluku Rover Ithola Mars Losing Atmosphere
17437	0 AIDS ne-HIV, Isigaba, Ezinto eziphilayo ezinto eziphilayo nasemkhakheni wezinto, Biology, Hepatitis C, Ian Sample, Immunology, kwesigaba Main, Abacwaningi bezokwelapha bazishaya, Isayensi, The Guardian, UK news
← Indlela Amehlo akho akhaphele imicabango yakho I top killers amane zanamuhla entshonalanga →